Wonke umuntu kufanele abe nensimu yakhe siqu. Lokhu akusebenzi kuphela kumuntu omdala, kodwa nakumntwana. Ukuhlobisa i-nursery udinga ukucabangela iminyaka nobulili bomntwana. Ngeke ukwazi ukwenza isilinganiso, njengoba umuntu omncane azothatha isikhathi esingaphezu konyaka ekamelweni lakhe: uzokhula, akhule, adlale, afunde, alale, axhumane nabazali nabangani.
Territory of the man
Uma sikhuluma ngekamelo lomfana, ngakho-ke akufanele sikhohlwe ukuthi uyindoda yesikhathi esizayo, okusho ukuthi leli yindawo engavamile. Kufanele kube khona isimo esifanayo. Yiziphi izithakazelo zabafana? Ibhola, ukulwa, ikhompyutha, imidlalo engafanele futhi esebenzayo. Amakamelo okulala abantwana abafana kufanele ahlangabezane nezimfuneko zeschoolschooler, ozoba maduze.
Ifenisha kungcono ukukhetha ukusebenza, kepha ungakhohlwa ngesitayela. Izesekeli ekamelweni lokulala kumele futhi zigcizelele ukuzikhethela kanye nobulili bomntwana. Isibonelo, uma umfana ethanda ukwakha futhi imodeli, ukuhlelwa kokuqala kwendiza, okuzobe ihlala ngaphansi kwelayili, kuyamfanelekela kakhulu. Uma lo mfana ethanda ukudlala izindaba ze-detective nokufunda izindaba ze-detective, ngokuqinisekile uzothanda ama-linens ebhekwe nesithombe se-Spider-Man.
Igumbi njengethoyi elikhulu
Futhi yiliphi uhlobo lomuntu, ngisho noma eneminyaka engu-7-10 kuphela, engathandi izimoto? Kungani ungenzi igumbi lezingane labafana abaphethe iphepha lodonga ababoniswa ngalo. Ngendlela, igumbi lingakwazi ukungena ngaphakathi kwebala lokudlala: umbhede - imoto yokugijima, ifenisha - imidwebo yesondo lokuqondisa noma isikebhe, ekhoneni - ihholo lemidlalo elincane. Intombazane izothanda ikamelo elisebenzayo ngaphezulu: indawo yokulala ephethe indawo yokusebenza, lapho esitezi sesibili kukhona umbhede, futhi okokuqala kukhona ideskithophu yekhompuyutha lapho kuzobekwa khona izinto ezahlukene zehhovisi kanye nekhompyutha ephathekayo.
Njengoba sesichazile kakade, izindlu zokulala zezingane zabafana zidinga indlela enesibindi nokudala. Ngayinye yalezi zinto kufanele zithwale kokubili umthwalo osebenzayo, futhi zibonise izidakamizwa nemikhuba yengane. Ungaqala ngomklamo womnyango: khetha kuye iphosta elikhanyayo, Yebo, ngaphandle kokubamba iqhaza kwendodana yakho.
Njengoba sekushiwo kakade, kuyadingeka ukuthi izindlu zokulala zabantwana ziveza ubuntu bomuntu. Isibonelo, ukubhaliswa kwasekuqaleni odongeni noma igama lomfana ophahleni, emnyango. Masivuke nomuzwa wokuthi leli yindawo yakhe siqu. Nikeza okukhethwa kukho kwengane yakho ukubhalisa bese ucela umbono wakhe. Ukubamba iqhaza kwakhe ekukhethweni kokuhlobisa kubaluleke kakhulu, ngakho uzoqonda ukuthi uyilungu lomndeni kanye nomuntu okubhekwa kuwo wonke umuntu lapha.
Uzoyithanda lo myalelo
Imiphi imboni yamuva nje enganikeli: ifenisha yokuqala, izindlu zokulala zezingane zabafana, amaphephadonga wesithombe nama-heroes-tale heroes. Uma indodana yakho ithanda igumbi layo, iyozama ukufaka umyalelo kuye yedwa, ngaphandle kosizo nokusekelwa kwabantu abadala. Yiqiniso, izindleko ezinkulu zezimali kuzodingeka zisetshenziswe ukuze kulungiswe kahle izindlu zokulala zezingane zabafana. Intengo yezinto zokwakha kanye nenfenisha ephakeme, igumbi lizobe likhululekile kakhulu. Inhlanhla ngokukhetha kwakho!
"Fruttis" - ifenisha yezingane ukuze impilo yengane
Okudingekayo ingxenye - ukwesekwa kwefenisha okulungiswayo
Metal noma ondulin: okuyinto engcono? Yini ukuphathisa angahlali nawo?
Dzhey Barushel: Filmography, izithombe, kanye nempilo yakho
Votkinsk: zokungcebeleka kanye nencazelo
Imihlola Electrical kanye optical emkhathini
Exacerbation ka kolwelwesi, ukudla kanye nokwelashwa
History of the inombolo. Ukuthuthukiswa lwati lwenombolo